मानिस बन्न बाँकी जिन्दगी - Bishwo Sandesh - Bishwo Sandesh
मानिस बन्न बाँकी जिन्दगी
मानिस छुत अछुत हुन्छ म भन्दै भन्दिनँ,
जाति र पाती छुट्याउने रीतलाई म मान्दै मान्दिनँ ।
बुझी वा नबुझी, जानी वा नजानी बाल्यकालमै सुनेकोमात्र होइन, तिहारमा सामूहिक देउसी–भैलो खेल्दा अरूको स्वरमा स्वर थपेको गीत हो । मिले पनि नमिले पनि कम्मर हल्लाएको गीत हो । लाग्छ, आज त्यो गीतले तेरो मानवता, तेरो समानता कहाँ छ भनी प्रश्न गरिरहेछ ।
विद्यालयमा अध्ययनताका मेरा सहयात्रीमध्ये एकजना थिए– मानबहादुर विश्वकर्मा । कक्षामा जहिल्यै प्रथम ! सायद साथीको पढाइको दु्रत गति र मेरो जुम्सो गति देखेर होला, मलाई एकाधपटक बुवाले भन्नुभएको याद छ– त्यो मानबहादुरजस्तो पढ्न सक्दैनस् ? मलाई अहिले लाग्छ, व्यवहारमा फेल भएपछि झुटा तर्कको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ कि मौनता साँध्नुपर्छ । त्यसबेला मैले मौनताको बाटो रोजेको थिएँ । पछि साथी मानसिक रूपमा बिरामी हुनुभयो । सबैको सामूहिक प्रयत्नपछि उहाँ सामान्य अवस्थामा फर्किनुभयो । विद्यालयस्तरको पढाइपछि एकपटक काठमाडौँमा भेटघाट भए पनि त्यसपछि अर्को साइत जुरेको छैन ।
यो प्रसङ्ग कोट्याउन उक्काउनुपछाडिको कारण हो– हामी जुन जातमा जन्म्यौँ, निवेदन हालेर कार्यान्वयन भएको होइन । आ–आफ्ना कथाव्यथाका बाबजुद पनि अहिले मलाई जातका कारण राजधानी, समाज जति सहज र सरल भयो, भएको छ र हुनेछ, के उहाँलाई मैले प्राप्त गरेको त्यो शीतलता प्राप्त भयो, भएको छ र हुनेछ ? चिट्ठा प¥यो भने थाहा छैन, नत्र उहाँ परम्परा वा अन्य बहानाबाजीमा उच्च जात भनाउँदाले मच्चाउने संहारबाट कसरी जोगिन सक्थे र अब पनि कसरी जोगिनुहोला ? कति ठक्कर खानुभयो वा खानुपर्ने हो, उहाँलाई थाहा छ । सन्ततिहरूले पनि उही भुमरीभित्र गुम्सनुपर्नेछ । प्रकृतिमाथि मानिसको प्रहार भए पनि पृथ्वी घुमिरहेको छ, प्रकृतिको चक्र रोकिएको छैन तर थाहा छैन, किन मानवीयताको चक्र रोकिएको हो वा रोक्न खोजिएको हो ? मानबहादुरजस्ता अरू मेरा केही साथीहरूको थर अहिले पनि भूमिगत छ । कति थर सच्याउन बाध्य छन् । माथि उल्लिखित गीत समानताको विम्ब हो तर पनि अवस्था जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो छैन, जस्तो नहुनुपर्ने हो, त्यस्तो छ ।
मानिस जन्मजात समान, स्वतन्त्र र कानुनबाट संरक्षित भएको मानिन्छ । व्यक्ति, वर्ग, समूह वा समुदायबीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, पेसा, सम्पत्ति, राष्ट्रियता वा कुनै पनि आधारमा असमान वा फरक व्यवहार गर्नु नै भेदभाव हो भने समान व्यवहार गर्नु नै समानता हो । न्यायाधीश क्लाइरे ल्हुरेक्स दुवेको शब्दमा समानता भनेको न्याय हो र न्याय भनेको समानता हो ।
धार्मिक, साँस्कतिक, जातीय वा सामाजिक आधारमा हुने विभेद घृणित, निन्दनीय कार्य हो, जसमा व्यक्ति वा समुदायलाई समाजभन्दा पृथक राख्ने र नीच व्यवहार वा हेय दृष्टिकोण र व्यवहार अवलम्बन गरिन्छ । जातविशेषका आधारमा उचनीचको व्यवहार गर्ने, आत्मसम्मान र मर्यादामा आँच पु¥याउनेखालका कार्य हुन्छ । धार्मिक, साँस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन नदिने, सार्वजनिक सेवा तथा प्रयोजनका वस्तुहरूको प्रयोग गर्ने वञ्चित गरिन्छ । यस्ता व्यवहार वा कार्यहरू सामाजिक रूपले गलत, नैतिक रूपले निन्दनीय र कानुनी रूपले गम्भीर सामाजिक अपराध हुन् । सभ्य समाजका लागि लज्जाको विषय हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न पनि हो । कानुनी शासन, मानवअधिकारमाथि चुनौती पनि हो ।
समस्याको हाँगा, पात, छाम्ने, जरोमा नपुग्ने प्रवृत्ति घातक बनेर आएको छ । अज्ञान, अल्पज्ञान, स्वार्थमा आधारित ज्ञान, तर्क, बहस, छलफल, व्यवहार, आचरण समस्या बन्दै आएका छन् । सरोकारवालाहरूले यसतर्फ अझै पनि विवेकको बिर्को बन्द गरी राख्ने हो भने यस्ता नियतिहरू ओहोरदोहोर गरिरहनेछन् । घटनामा केन्द्रित भएर हामी प्रतिक्रियात्मक भइरहनेछौँ । धर्म र धर्मशास्त्रलाई हामी साफसँग गाली गर्छौ तर जरोमा जाँदैनौ । धर्मलाई कर्मकाण्डमा सीमित गरिएको छ । धर्मलाई पूजापाठ गर्नु, मन्त्र भट्याउनु, चन्दन, टीका लगाउनु, मन्दिर धाउनु, गेरुवस्त्र धारण गर्नु, जनै लगाउनु, आपराधिक कर्म गरे पनि धेर–थोर दान गरी पाप कटाउनुजस्ता अर्थमा अथ्र्याइएको छ । धर्म वा संस्कारका नाममा भट्याइने मन्त्रको अर्थ थोरैलाई मात्र थाहा हुन्छ । श्रवण गर्ने पनि सुन्नका लागि सुनिदिन्छ । अर्थ, सन्दर्भ, परिवेश के हो, ऊ प्रश्न गर्दैन । कहाँ, किन, कहिले, कसरी, कसको, कति आदि सवालको जवाफ खोजिँदैन । जिज्ञासु जमात पनि निराश बन्न पुग्छ । यसको अर्थ हो– धर्मलाई ठगीखाने भाँडोका रूपमा प्रयोग गरियो, गरिँदै छ र गरिने पनि छ । भित्री तहसम्म डुबुल्की मार्ने हो भने धर्म र दर्शनको अर्थ यसभन्दा बिल्कुल पृथक र व्यापक छ । धर्मलाई प्रचलन, परम्परा, न्याय, नैतिकता, कर्तव्य, चरित्र, आचरण मानिन्छ । मानिसले धारण गर्ने विचार, आचरण, जीवनशैली, दर्शन धारण गर्दछ, यही नै धर्म हो । हिन्दु सम्प्रदायमा प्राणी र ब्रह्माण्डको सम्बन्ध कायम, अधिकार, कर्तव्य, आचरण, व्यवहार, गुण, जीवन जिउने कला, नियम, कानुन आदि धर्म भनी बुझिन्छ ।
डा. युवराज सङ्ग्रौलाको भनाइमा ‘धर्म’ शिक्षित मानिसका बुझाइमा ‘राम्रा गुण, सिद्धान्त र ‘दार्शनिक मान्यताहरूको’ पुञ्ज हो । ‘धर्म’ एउटा गुणकारी संसारको सृष्टिमा सकारात्मक ज्ञानको प्रक्षेपण गर्ने माध्यम, संसारको सनातन अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्ने प्राकृतिक नियमहरूको संश्लेषण र प्रकृति (पदार्थ) र ज्ञान (चेतना)को समायोजन र अन्तर्विरोध वा अन्तर्सम्बन्धबाट जन्मिने विज्ञानको ‘समष्टि’ हो वा संसारका सूक्ष्म र तटस्थहरूलाई बुझ्ने वा जान्ने दर्शनशास्त्र हो । ‘धर्म’ त्यसैकारण ‘धारण गर्न योग्य’ नियमहरूको सङ्ग्रह हो । धर्म आज हामीले बुझिरहेको ‘कर्मकाण्ड’ वा ‘संस्कार’ नियम वा पद्धति होइन । धर्मलाई शाश्वत प्राकृतिक गुणहरूबाट निःसृत नियमहरूको ‘पुञ्ज’, पदार्थ र ज्ञानको संयोजन र अन्तद्र्वन्द्वबाट निःसृत विज्ञानका सिद्धान्तहरू, ज्ञान र विज्ञानको औचित्यता पुष्टि गर्ने अन्तर्निहित ‘सारपूर्ण र गर्भित’ मान्यताहरू, जसलाई ‘दर्शन’ भनिन्छ र सबै ‘ज्ञान’ लाई समष्टिमा अभिव्यक्त गर्ने अन्तर्निहित अवधारणाका रूपमा ग्रहण गर्ने गरिन्छ । (फौजदारी न्याय प्रणाली नेपाली कानुनशास्त्र पूर्वीय कानुनी दर्शनका अकाट्य मान्यता र प्रभाव ः नेपाली फौजदारी न्याय प्रणालीको आधुनिकीकरणको सन्दर्भ, पृ.५)
के विभेदको अपजस धर्मशास्त्रले नै बोक्नुपर्ने हो ? यस्ता तर्क कति न्यायोचित हुन्छन् ? हिन्दुहरूको आदर्श ग्रन्थ वेद, उपनिषद्का केही प्रावधान हेरौँ : शास्त्रीय भनाइ नै छ– जन्मना जायते शुद्र कर्मण उच्चते । अर्थात् जन्मदा मानिस शुद्रको हैसियतमा जन्मछ, स्थान भने कर्मले निर्धारण गर्दछ । ऋग्वेदमा विराट पुरुषलाई ‘ब्रह्मा’को नाम दिई मुखबाट ब्रह्मा, पाखुराबाट क्षेत्री, पेट वा जाँघबाट वैश्य र खुट्टाबाट शुद्रको जन्म भएको भनी उल्लेख गरिएको छ । ब्राह्मर्णेस्य मुखमासीद्बाहु राजन्यः कृतः । उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शुद्रो आजायत । (ऋगवेद १०÷९०÷१२) विडम्बना यसलाई पनि जातीय विभेदका रूपमा यदाकदा चर्चा गरिएको पाइन्छ । विम्बका रूपमा प्रयुक्त यस सूक्तमा पुरुष भनेको लोग्ने मानिस नभई, शक्तिको अर्थमा प्रयोग गरिएको हो । अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् । सङ्कुचित वा सानो चित्त भएकाहरू यो मेरो र यो तेरो हो भन्ने भावनाबाट ग्रसित हुन्छन् । उदार वा ठूलो हृदय भएकाहरूका लागि संसारमा सबै समान छन् । महोपनिषद्, (अध्याय ४, श्लोक ७१०) वर्णबारे भागवत गीतामा उल्लेख छ– चातुर्वण्र्यं मया सृष्ट गुणकर्म विभागशः । गुण र कर्मका आधारमा चार वर्णको सृष्टि भएको हो । बुद्धको मतअनुसार– यस्स पार अपार वा पारांपारं न विज्जति । वीतद्दरं विसंयुत्तंm–तमहं ब्रुमि ब्राह्मणं ।।३।।
जसको पार (आँखा, कान आदि छ इन्द्रिय) अपार (रूप, शब्द आदि छ विषय) र पारापार (म, मेरो) भन्ने छैन, जो भयरहित भएर अनाशक्त हुन्छ, उसैलाई म ब्राह्मण भन्दछु ।।३।। (भिक्षु अमृतानन्द (नेपाली अनुवाद), धम्मपद २०७०, आनन्दकुटी विहार संस्था, काठमाडौँ, पृ.१७२)
धर्तीमा गाली खाने शास्त्रमध्ये मनुस्मृति पनि एक हो भन्दा अन्यथा नहोला । विशेषतः महिला र दलित विरोधी स्मृतिका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । महिलालाई देवीको प्रतीक मान्ने मनुले के नारी र दलितप्रति यति निम्नकोटीका अपमानजनक वाणी प्रकट गरेकै हुन् ? मानाँै, मनुकै वाणी भए पनि के आजको असमानता, विभेद, अन्याय आदि तिनै सीमित भनाइका उपज हुन् ? यहाँ मनुस्मृतिको बचाउ गर्न खोजिएको होइन । समय कालखण्डमा उनका भनाइलाई विकृत र अपभ्रंश बनाउँदै ल्याइएको त होइन ? कतै बेलायती उपनिवेशवादको प्रहार त होइन ? यसमाथि पनि गम्भीर चिरफार गरौँ, जे छ त्यही निचोडबाट अगाडि बढौँ भन्ने हो ।
दक्षिण एसियाली लामो इतिहास, गौरवमय, आदर्श, समृद्ध परम्परा र संस्कृतिमाथि आगो सल्काउने काम बेलायती उपनिवेशबाट सन् १९२३ बाट सुरु भएको थियो । म्याकुलेको जेनरल कमिटी अफ पब्लिक एजुकेसन फन्ड नामक संयन्त्रमार्फत यी काम गराइएको थियो । भनिन्छ– त्यसताका कतिपय महŒवपूर्ण दस्तावेजहरू गायब गरियो । मनुस्मृति, चाणक्यको अर्थशास्त्र आदि ग्रन्थ हेरफेर गरियो । संस्कृत अव्याहारिक र फल अर्थात् रोजगारी नदिने शिक्षा हो भन्दै फल दिने शिक्षाका रूपमा अङ्गे्रजी छिराइयो, साथमा उतैको रहन, सहन, संस्कृति, विचारधारा पनि । यही धारा विक्रम संवत् २०१२ सालमा नेपालमा पनि छि¥यो र २०२८ मा नयाँ शिक्षाको नाममा लागू भयो, जुन हाम्रो चाहना थिएन, अरूकै थियो । यसतर्फ पनि घोत्लिन आवश्यक भइसकेको छ ।
जातीय विभेद पश्चिमी उपज
कतै जातीय विभेद पश्चिमी उपहार त होइन ? शिक्षा सुधारको नाममा मनुस्मृतिमा जातीय विभेद विषय वा प्रसङ्ग उल्लेख हुनु, प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा बेलायतमा वर्ष दिन बिताउनु, स्वदेश फर्केपछि मुलुकी ऐन–१९१० आउनु र त्यसमा जातीय विभेदले प्रशस्त स्थान पाउनु के संयोगमात्रै हो ? भलै नेपालमा चौधौँ शताब्दीतिर जयस्थिति मल्लले मानव न्यायशास्त्रबाट जातीय विभेदको विजारोपण गरी शुद्रलाई स्थायी रूपमै अछुत बनाइएको पाइन्छ । भारतका अध्येता विजय रामास्वामीका अनुसार, ‘विश्वकर्मा भनेका असल कालीगढ र डिजाइनरहरू हुन्, जो ब्रह्माका छोरा पनि हुन्, जसले रावणका लागि लङ्का, राधाकृष्णका लागि द्वारका, इन्द्रका लागि स्वर्गलगायत विश्वजगतको भौतिक निर्माण गरे । यसका अतिरिक्त उनले देवादानवहरूका हातहतियार तथा देवहरूका लागि उड्ने रथहरूको समेत निर्माण गरे । (सरोजदिलु विश्वकर्मा, सौर्य अनलाइन, २०७६ माघ २४)
राजकुमार दिक्पालका अनुसार– विश्वकर्मा (उही) अनुसार पृथ्वीनारायण शाहका कालमा उनलाई साथ सहयोग दिने श्रमिक तथा शिल्पी समुदायका अगुवाहरूमा बिसे नगर्ची र येखाजङ्गसँगै कालु सार्की, जसवीर कामी तथा मनिराम गाइनेको योगदान पनि महŒवपूर्ण रहेको छ । तीमध्ये कालुले सैनिकले लगाउने छालाको टोपी, तोपको दाप, खुँडा, खुकुरी, धनुकाँड सुरक्षित राख्ने झोला, बन्दुक बोक्ने पेटीजस्ता छालाका सामग्री बनाउँथे । यस्तै जङ्गल फाँडेर गोल बनाई फलामका खुँडा, खुकुरी, तरबार, कटारी, छुरी, भाला, धनुकाँडजस्ता हतियार बनाउने काम जसवीर कामीले गर्थे । मणिराम गाइनेले चाहिँ विभिन्न भागमा डुलेर गीत गाउँदै पृथ्वीनारायण शाहको पक्षमा सुराकी गर्थे ।
जङ्गबहादुर राणाको आदेश थियो ः कामी, सार्की, दमाई, कर्मी खोसे इलम पनि बिग्रन्छ ।
कारखाना पनि बिग्रन्छ । कोते, पिपा, जमादार, खलासी एक पनि नखोसेस् । यिनलाई खोस्नु बडो अनविवेक हुन्छ, किनभने यी थोरै खाई धेरै काम गर्छन् ।’ (असार ६, २०७७, हिमाल खबर)
संस्कृतमा ज्ञानलाई ब्रह्मा र युद्धलाई क्षेत्र भनिन्छ । अतः युद्ध लड्ने क्षेत्री हुन्छ । बलियो, दह्रो जाँघ हुने परिश्रम गर्छ, ऊ वैश्य हो भने सबैलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति शुद्र हो । जन्मका आधारमा सबै समान हुन्छन्, कर्मका आधारमा उनीहरू हैसियत निर्धारण हुन्छ । ब्राह्मण खलकका द्रोणाचार्यका छोरा अस्वस्थामा युद्धकलामा पोख्त थिए, उनी क्षेत्री मानिए । क्षेत्री कुलका पर्शुराम शास्त्रमा पोख्त भएपछि ब्राह्मण हुन पुगे । शुद्रका छोरा चन्द्रगुप्त मौर्य योद्धा थिए, क्षेत्री भए । चाणक्यको भनाइ छ ः कोही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शुद्रको गुण लिएर जन्मदैन । व्यक्ति जन्मेपछि उसले यी गुणहरू प्राप्त गर्दछ ।
बाहिर छुवाछूत, जातीय विभेद, असमानता ठीक हो, यसलाई पाल्नुपर्छ, हुर्काउनुपर्छ कोही भन्दैन तर हिंसाका बादलहरू मडारिन छोड्दैनन् । यसको सिधासिधी अर्थ हो ः समस्या हामीमै छ । हामी जे भन्छौँ, त्यो गर्दैनौँ, जे गर्छौं, त्यो भन्दैनौं । समस्या यही हो । ‘किन’ बाट कारण तथ्यमा रही सत्य खोतल्ने हो भने निष्कर्षमा पुग्न सहज हुन्छ । अपराधी ती शासक हुन्, जसले जनचाहनाभन्दा पनि आफ्नो इच्छा अनुकूल कानुन कोरे । विभेदलाई सत्तामा टाँसिने सूत्र बनाए । पछिल्लो चरणमा कानुनलाई कागजमै सीमित राखे, व्यवहारको कसीमा उतारेनन् । दोषी ती हुन्, जसले धर्मको आडमा धर्मशास्त्रको अपव्याख्या गरी जातीयताको खाडल खने र खनिरहेका छन् ।
अतः इतिहास जे थियो, त्यही रूपमा हेरिनुपर्छ, न कि अनुकूलता र प्रतिकूलतामा ! हिजो परिचय कर्मले निर्धारण गथ्र्यो । प्रायः थरहरू स्थान विशेष, पदविशेषमा आधारित थिए । बाजेबाबुको थर (पोखरेल, पौडेल, आचार्य, खरेल …आदि) आधारमा जन्मँदा ब्राह्मण, अनि शुद्र (दमाई, कामी, सार्की …आदि) हुनुपर्ने न कुनै नियम थियो । माथिल्लो र तल्लो भनिएको जातबीच मात्र होइन, दलित समुदायभित्र पनि मानिस बन्न धेरै बाँकी छन् । हिसाब–किताब सबैको हुनुपर्छ । अतः लडाइँ दलितको होइन, मानवताविरुद्धको हो । समानताको होइन, समानता पुनःस्थापनाको हो, जहाँ मानव चेतनाहरूको सामूहिक र सार्थक प्रयत्न आवश्यक छ । स्रोत -गोरखापत्र
(लेखक कानुन तथा मानवअधिकार क्षेत्रमा सम्बद्ध हुनुनुहन्छ ।)
प्रकाशित | २० असार २०७७, शनिबार १४:१२
भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विजय निश्चित
मिस वर्ल्डमा विश्वका सुन्दरीलाई उछिन्दै अनुष्का, निरन्तर भोट गरि मिस वर्ल्डको ताज जिताउन अपिल
एशिया प्रशान्त क्षेत्रका हवाई महानिर्देशकको सम्मेलन काठमाडौँमा
एनआरएनए फान्सको अध्यक्षमा नरेन्द्र शाही (ठकुरी ) निर्वाचीत